Chishanu 6 Chivabvu 2022
Chipo Chebhokisi Horo yechipo chebhokisi reJack Daniel's Tennessee Whisky harisi chete bhokisi rakajairwa kusanganisira bhodhoro mukati. Uku kwakasarudzika kwepakeji kwakagadzirirwa hukuru hwekugadzira asiwo yekuchengetedza bhodhoro panguva imwe chete. Nekuda kwemahwindo makuru akavhurika isu tinogona kuwona mubhokisi rese. Chiedza chinouya zvakananga kuburikidza nebhokisi inoratidzira yepakutanga ruvara rwe whiskey uye kuchena kwechakagadzirwa. Kunyangwe mativi maviri ebhokisi achivhurika, kusimbisa torsional kwakanaka. Bhokisi rezvipo rakanyatsogadzirwa kubva kumakadhibhodhi uye rakazara matte rakakomberedzwa nekupisa stamping uye zvinhu embossing.
Madhirowa Labyrinth naArteNemus chipfuva chemadhirowa ayo kutaridzika kwake kunosimbiswa nenzira yekutanga yeiyo veneer, inorangarira mumigwagwa iri muguta. Kufunga kunoshamisa uye mashandiro evateki anoenderana neari pasi payo. Iyo misiyano yakasarudzika yemaple uye dema ebony veneer pamwe nehupamhi hwepamusoro hwemhizha kusimbisa kutaridzika kweLabyrinth yakasarudzika.
Visual Art Iyo purojekiti ndeyekutevedzana kwepikicha yedhijitari yeScarlet Ibis uye nharaunda yayo yakasikwa, ichinyanya kusimbiswa nemuvara uye yavo inoratidzika hue inowedzera apo shiri inokura. Iro basa rinokura pakati pezvakasikwa zvakasanganiswa zvichisanganisira chaizvo uye zvekufungidzira zvinhu izvo zvinopa akasiyana maficha. Iyo tsvuku ibis ishiri yemuno kuSouth America inogara pamhenderekedzo nemakunguo ekumusoro kweVenezuela uye iyo ruvara rutsvuku runoita chiitiko chinooneka kune unoona. Uku kudhirowa kunovavarira kuratidza kubhururuka kwakanaka kweiyo bhebhu tsvuku uye ine yakajeka mavara eiyo tropical tropical fauna.
Logo Sezvo Wanlin Art Museum yaive munzvimbo yekampasi yeWuhan University, kusika kwedu kwaida kuratidza hunhu hunotevera: Nzvimbo yekusangana yepakati pevadzidzi kukudza uye kukoshesa hunyanzvi, apo ichiratidzira zvimwe zvezvinhu zvakajairidzwa. Izvo zvaifanirawo kuuya se 'vanhu'. Sevadzidzi vepakoreji pavanomira pamutsetse wehupenyu hwavo, ino museum yemhizha inoita sechitsauko chinovhura yevadzidzi hunyanzvi kukoshesa, uye hunyanzvi huchavaperekedza hupenyu hwese.
1x3 Tafura Yekofi Chitatu 18 Chivabvu
Decor Photoinstallation Chipiri 17 Chivabvu
Only Right Here Akabata Banga Muvhuro 16 Chivabvu
Mudzanga / Gumini Webhusaiti Chipo Chebhokisi Madhirowa Visual Art Logo